Reer Konfureed(Somaliya) Iyaga Dulman oo loo doodayaaye maxay doonayaan? – hogaanka.org
The Value of the Masjid- Mufti Menk
Reer Konfureed(Somaliya) Iyaga Dulman oo loo doodayaaye maxay doonayaan?
Afartan duleysan ee calankii Somaliya sitaa marna ma mataalaan cidna walse waxaa ka qaldamey cidii ay ku hor banaanbixi lahaayeen.
Sidaa darteed Reer Konfureed iyagaa dulman oo loo doodayaaye waxay doonayaan!
Ma Ikran Tahlil bay cadaalad u doonayaan
Ma Ilaaladii Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur bay xasuuqoodii xal u doonayaan
Ma Engineer Yariisow ayeey xaqiisii doonayaan
Ma Farmaajey maxkamd la doonayaan
iyaa dulmane oo muuse( Madaxweynaha Somaliland) u doonayeeye Reer koonfureed Maxay doonayaan.
Ilay doqonimadu waa tan ee reer Konfureed tirada yare maxay doonayaan.
Hadaba cambaareyn iyo in lagu mudaharaado waxaa mudan Farmaajo oo xoog ku haysta Reer Konfureedka labana in uu qori caradii ku sii joogo talada dawlkaa Fashilmey ee Somaliya.
Balse Muuse waxaa Kufilan soo dhaweenta balaadhan ee dadkiisa reer Somaliland oo aan u kala hadhin soo dhaweyntaasi hambalyo hambalyo Somaliland Guul
The Russian attack on Ukraine marks a new era for Europe, MEPs say — The European Sting – Critical News & Insights on European Politics, Economy, Foreign Affairs, Business & Technology – europeansting.com Previous
The Value of the Masjid- Mufti Menk Next